नेपाल निर्माण व्यवसायी १७ औ वार्षिक उत्सव – Enayanepal.com
नेपाल निर्माण व्यवसायी १७ औ वार्षिक उत्सव
२०७३, २६ चैत्र शनिबार मा प्रकाशित
सुर्खेत, २६ चैत । नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको १७ औं बार्षिक साधारणसभामा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले निर्माण व्यवसायीहरुकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पेशा मर्यादित हुन नसकेको र काममा गुणस्तरीयता आउन नसकेको बताएका छन् ।
उनले साना कामहरु साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको भन्दै उपभोक्ताहरुलाई दिइने काम रोक्न सरकारसंग आग्रह गरिएको जनाए । सवैभन्दा न्यून रकम हाल्नेलाई टेण्डर दिने सरकारको नीतिले व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै उनले क्षमता र दक्षताका आधारमा काम दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम गर्नेलाई दण्ड गर्ने प्रावधान नहुँदा पनि निर्माण व्यवसायी पेशा सम्मानित हुन नसकेको बताएका छन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ?द्रप्रसाद शर्माले घटेर टेण्डर हाल्नु नै विकास र प्रगतिको बाधक भएको बताए ।
महासंघका कोषाध्यक्ष रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले कुनै काममा टेण्डर हाल्दा घटेर होइन थपेर हाल्न आग्रह गरे ।
सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष डा. सूर्यबहादुर खड्काले काम र अवसर थुप्रै भएपनि पेशा मर्यादित हुन नसकेको बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामबहादुर विसीका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरु खगेन्द्र पोख्रेल, पूर्णबहादुर बस्नेत, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहनप्रकाश आचार्य, पूर्व अध्यक्ष डम्बरबहादुर बस्नेत, सुर्खेत उद्योग बाणिज्यका कोषाध्यक्ष दिपेन्द्र ढकाल, हेभी इक्विपमेन्टका अध्यक्ष मदन खड्का, कांग्रेस सभापति कमलराज रेग्मी, एमाले उपाध्यक्ष अमृत विसी, राप्रपा अध्यक्ष मानबहादुर खड्का, राष्टिूय जनमोर्चाका विष्णु शर्मा, समाजका निवर्तमान अध्यक्ष जनक रावललगायतले शुभकामना व्यक्त दिएका हुन ।
कार्यक्रममा महासचिव हर्षविक्रम खड्काले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सोही अवसरमा निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय निर्माण व्यवसायीको छवि बनाउन सफल सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यवसायी डा. सूर्यबहादुर खड्कालाई सम्मान गरिएको थियो ।